केसीको पक्षमा माइतिघरमा प्रदर्शन, बाबुराम भट्टराई पनि गए
काठमाडौं–२२ दिन देखि अनशन बसिरहेका डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन शुरु भएको छ ।
केसीको मागमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै सरकारलाई दबाव दिनका लागि उनका केसी समर्थकहरु प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । बानेश्वरसम्म पुग्ने ¥यालीमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा बाबुराम भट्टराई पनि पुगका छन् ।
यस्तै अभिनेत्री मनिषा कोइराला, पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीपनि ¥यालीमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ ।
धादिङमा समातिएको सुन काठमाडौं आउँदा तामा कसरी भयो ? गृहमन्त्रीले संसद्‍मा दिए जवाफ